क’ण्डमको प्रयोग बिना बच्चा नबस्ने गरी कसरी शा-रीरिक सम्पर्क गर्ने ? भिडियो हेर्नुस् – Halkhabar kura
३ चैत्र २०७६, सोमबार ०९:३१
क’ण्डमको प्रयोग बिना बच्चा नबस्ने गरी कसरी शा-रीरिक सम्पर्क गर्ने ? भिडियो हेर्नुस्
प्रायजसो धेरै महिलाहरु गर्भवती छु वा छैन् भन्ने कुराको बारेमा परिक्षण गर्न स्वास्थ्य चौकी जान लाज मान्ने गर्छन् । त्यसकारण घरेलु तथा प्राकृतिक तरिकाबाट पनि ग’र्भवती भए नभएको सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय अशुरक्षित यौ’न सम्पर्कका कारण ग’र्भप’तन गर्ने किशोरीहरुको संख्या बढ्दै छ । यस्तो अशुरक्षित सम्पर्कले गर्दा किशोरी अवस्थाबाटै महिलाहरुमा समस्या हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
महिलाले आफ्नो महि’नावारीको समय ख्याल नगर्दा र भईपरी आउने समयमा अस्थायी साधनको प्रयोगले नहुनाले नेपालमा ग’र्भप’तन गराउने किशोरीहरुको संख्या बढेको बरिष्ठ प्रसुती तथा स्त्री रोग बिशेषज्ञ डा. नुतन शर्माले बताउनु भयो ।
एक अन्र्तवार्ताको क्रममा डा.शर्माले एक पटक पनि महि’नावारी नभएकी १३ बर्षिय किशोरी समेत ग’र्भव’ती भएर आफुकहाँ आएको समेत बताउनु भयो । उहाँले किशोरीले बिशेष ध्यान नदिदाँ, पार्टनरको कारण यस्ता घटना हुने बताउनुभयो ।
त्यसको लागि हामीले घरमा दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने टुथपेस्टमा आफ्नो पि’साब मिसाउने यसरी मिसाउदा उक्त पेस्ट निलो भएको खण्डमा सम्झनुहोस् ग’र्भरहने सम्भावना हुन्छ । यदि तपाई घरमै बसेर ग’र्भ’वती भए नभएको टेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने दैनिक जसो घरमा प्रयोग गरिने भे’नेगरको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
त्यसको लागि भे’नेग’रमा आफ्नो पिसाब मिसाउने यसरी भे’नेग’रमा पिसाब पिसाउँदा रंगमा परिवर्तन आयो भने टेस्ट पोजेटिभ भएको सम्झनुपर्छ । यदि त्यसमा परिवर्तन देखिएन भने टेस्ट नेगेटिभ अर्थात ग’र्भ रहेको हुँदैन् । यस्तै प्राचिन समयमा पनि ग’र्भ’वती भएनभएको टेस्ट गर्ने चलन थियो ।
त्यतिबेला गहुँ वा जौँमा पिसाब मिसाउने । यदि उक्त गहुँ वा जौँ टुसाएमा ग’र्भ’वती भएको संकेत गर्ने चलन रहेको थियो । यस्तै अर्को तरिका बाट पनि ग’र्भ जाँच गर्न सकिन्छ ।उहाँले क’ण्डम बिना कसैसंग पनि सम्पर्क गर्न नहुने बताउँदै यदी त्यसो गर्नुछ भने महिलाको महि’नावारी च’क्र हेरेर गर्न समेत सुझाव दिनुभएको छ । हेरौं डा. नुतन शर्मासंगको यो अन्र्तवार्ता
Previous जानीराख्नुस है लसुन खानुका फाईदा र बेफाइदाबारे
Next के तपाईलाई थाहा छ ? बाथरोगले गर्छ तपाइको शरीरमा यस्तो असर